Lugood kaliya taageeraa audio ee AA3 iyo MP3, iyo videos in MP4, MOV, M4V iyo encoded la MPEG-4 iyo H.264. Ma la dhibtoonayay ee la soo dhaafay si ay u dajiyaan regelingen maktabadda Lugood? Haa, inkastoo Lugood ku dhawaaqday in ay taageeraan qaab regelingen, xaaladaha intooda badan, waxaan weli ma dajiyaan karaa files regelingen in Lugood. Waa dhab aad u niyad u ciyaaro regelingen in Lugood.
Halkan waa xalka. Waxaad isticmaali kartaa regelingen ah in conveter Lugood si loogu badalo wmv in Lugood qaabab socon. Article ka akhri hoos ku qoran si aad u hesho regelingen ugu wanaagsan ee Converter Lugood.
Qeybta 1: Hel regelingen ee Best & Professional in Lugood Converter
Qeybta 2: regelingen Free in Lugood Converter
Qeybta 3: regelingen Online in Lugood Converter
Ugu Wondershare, waxaan horumarin ku Video Converter , barnaamij caqli in uu leeyahay dhibaato ma ku soo celiyaa files regelingen si ay u la ciyaari karaa Lugood. Haddii files yihiin ciriiri ama uncompressed, Wondershare Video Converter aad u saamaxaaya in ay iyaga soo dhoofsadaan in Lugood ee click ee ah badhamada yar.
Professional Converter Lugood: Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo regelingen, wmv, MKV, AVI, FLV iyo qaabab badan si ay Lugood video taageeray.
Wax soo saarka video tayada sare: Waxaad u bedeli karaan wax video si caadi ah, 3D iyo HD videos la AAN tayada khasaaro.
Super Fast Converter: Waxaa ka dhaqso badan wax Converter suuqa u shaqeeyo, samaynta aad ku dhameysan habka diinta ka dhan ah oo kaliya minutes.s yar
Xoog video editor: Soo qaado qalab si ay u caawiyaan kor video leh sifooyinka video tafatirka classic.
Guba video inay DVD: Waxaad u isticmaali kartaa si ay u gubaan regelingen in DVD kaliya 3 tallaabo, ka dibna si xor ah u raaxaysan filimada shaashad weyn.
Sida loo badalo regelingen in Lugood
1. Import files regelingen
Ka dib markii aad u rakibay, waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji icon miiska si uu ugu tartamo app this. Oo waxaa si xor ah u bilaabi mashruuca.
In interface ugu weyn, waxaa jira a button. Just u riix si aad dajiyaan files regelingen aad barnaamijkan. Ama waxaad sidoo kale si toos ah iyaga jiidi karaan barnaamijkan.
Isla markiiba, files regelingen, kuwaas oo la soo daabici doonaa in Trey ka item bidix ee app this. Waxa uu na tusay sida hoos.
2. Dooro Lugood qaab socon sida qaab wax soo saarka
Waxa aynnu og nahay, Lugood taageertaa MP3 format audio. Waa maxay dheeraad ah, MP3 ayaa taageero ballaaran oo qalab kala duwan iyo codsiga software iwm diinta MP3 ka regelingen waa doorasho adiga kuu wanaagsan, waayo, waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad ku hagaagsan in ciyaaryahanka music iPod ka dib.
Si aad u dooratid MP3, dhinaca midig ee interface ah, kaliya riix "Qaabka Output" button in la furo suuqa kala qaab wax soo saarka, meesha aad tagi kartaa "qaab"> "Audio"> "MP3".
3. U beddelaan regelingen in Lugood
Markii wax walba la sameeyo, ee geeska hoose ee midigta ah Converter Video 's interface, waxaad riixi kartaa "Beddelaan" button. Hadda, app this waa diinta files si aad u MP3 u Lugood. Bar horumarka waxaa loo muujiyey waqti Boqolkiiba Buuxi oo haray. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka sida Jidka wax soo saarka aad u dhigay.
Burcad Lugood, ka dibna si toos ah jiidi MP3 files ka folder saarka maktabadda Lugood ah. Si ay iyaga ugu ciyaaro aaladaha Apple, kaliya sii wadaan iyaga u hagaagsan in qalab aad.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo regelingen in ay Lugood Converter
# 1. regelingen Free in Lugood Converter Wondershare Video Converter Free
Raadinta wmv si xor ah Converter Lugood? Waxaad tahay meel sax ah. App waxa uu leeyahay oo keliya ma aha shaqo video qaab beddelidda, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos iyo goobo badan oo soo bixi video.
Pro: a wmv in Lugood video Converter gebi ahaanba bilaash ah, qaababka kala duwan
1. No presets qalab laga heli karaa si ay u dejiyaan sida qaabab wax soo saarka. Waxay ka dhigan tahay in aadan u isticmaali kartaa si loogu badalo videos si iPhone, iPad, ama Android si toos ah telefoonada.
2. Marka ay timaado in tayada wax soo saarka video, la barbar dhigi karaa iyadoo Video Converter Ultimate.
3. Waxa aan haysanin awood ah DVD gubanaya.
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta Files regelingen in Lugood